Bọchị: Machị 31, 2020
Transportgbọ njem Mehmetçik, bụ onye a chụrụ n'ọrụ site na ịrụzu ọrụ ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Anatolia, ka ụgbọelu EGO General Directorate nyere na Ankara Intercity. Na arịrịọ nke Ministry of National Defense, megide ntiwapụ nke coronavirus (Covid-19) [More ...]
Emegheri Nemport Port Line, nke emechaala n’ọrụ nke ijikọ ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ oloko, ka emepere na ibubata n'okporo ụzọ. Udiri eriri nke na-ahapụ ọdụ Biçerova ma na-aga Nemport Port bụ mkpokọta ogologo 3km ma bụrụ 484 mita. [More ...]
A na-ewepụ Vegbọ njem Ọha na Publicbọchị Ọ bụla na Tekirdağ
Obodo Tekirdağ nke obodo ukwu na-aga n'ihu na -eme ka ihe niile na - agha oke agha na - aghagide ọrịa na - efe efe. N'ọnọdụ a, ndị na-ahụ maka ịgbasa ụgbọ ala na-arụ ọrụ na Tekirdağ Metropolitan Mun Transportation Public Transportation System site n'aka Ngalaba Ọha Ahụike na-agagharị na-agagharị kwa ụbọchị. [More ...]
Nhazi oche ohuru na ugbo ala nke ugboala na-eje ozi na Şanlıurfa
N'ime usoro mgbochi nchedo nje corona, ndị na - ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ nke Mịnịsta na - ahụ maka Mbipụta bipụtara ruo nwa oge belata 50% site na iweta nhazi oche ọhụrụ na ụgbọ njem ọha na-eje ozi na Şanlıurfa site n'aka Obodo ukwu. [More ...]
N'ihi ọrịa coronavirus nke metụtara ụwa dum, isi obodo gere oku nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavas "Na HomeKalAnkara". Ọnụ ọgụgụ ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha ejiri pasent 84 belata. Machị 2 [More ...]
Ruo ụtụtụ a, actorylọ ọrụ TÜVASAŞ akwụsịla imepụta nwa oge. Ngalaba ebe a na-arụpụta ụgbọ oloko mba ahụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Mgbe mgbasa nke coronavirus (Covid-19) gbasaa, ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike ịkwụsị ọrụ nwa oge. [More ...]
Mkpesa ndị omekome site na n'ime obi ruo ụgbọ ala kpụ ọkụ n'ọnụ na bọs!
İBB kwuru na agbanyeghị usoro COVID-19 n'ụtụtụ Sọnde, ụgbọ ala abụọ siri ike na ha gbara akwụkwọ mkpesa megide ndị na-emegide İBB na Onye isi Ekrem İmamoğlu. Nchoputa IMM na ahịrị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ [More ...]
Uru na Efu Igwe Eletrọnik
A na-ewu ewu sịga eletriki dị ugbu a. Anyị bidoro ịhụ sịga elektrọnik n’aka ndị niile nọ n’okporo ụzọ, n’ụlọ, n’ebe a na-ere akwụkwọ. Ngwaọrụ a anaghị emerụ ahụ mmadụ aru karịa ị cigaretụ sịga nkịtị. Ọtụtụ ndị kwụsịrị ị smokingụ sịga [More ...]
MOTAŞ na-ewere Distzọ Mpụga Ọha na Transportgbọ Ọgbọ Ọha na Ọha
Obodo Malatya mepere emepe nwere usoro ọhụrụ megide Nje Virus Corona. Ọ bụ ezie na a na-ewere usoro ndị na-elekọta mmadụ na njem ụgbọ njem ọha, a na-atụkwa ọkụ maka ndị njem na-abịa MAŞTİ. Mgbakọ nke obodo, nke legidere anya n’obodo niile, bụ nke MOTAŞ [More ...]
Nlebara anya na taxis n'ime oke nke Coronavirus jikoro na Izmir!
Ndi isi obodo Izmir bidoro ịchịkwa taxis nke azụmahịa. Ministri nke ime obodo mere ndokwa maka okporo ụzọ nke ndị tagzi ahụ dị ka ọnụọgụ ikpeazụ nke ikike ikike ha. Obodo Izmir nke obodo ukwu na-aga n'ihu ịlụ ọgụ ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ a. Obodo ukwu, nke ndi Minista ime obodo kwuru [More ...]
Bgbọ elu ụgbọ elu na-abanye n'ime obodo na Izmir
Dị ka akụkụ nke mmachibido njem nke etiti, a na-akagbu ụgbọ elu ụgbọ elu nke Izmir, ya mere ọtụtụ ụgbọ ala na-eme ụgbọ elu ụgbọ elu na-adọta n'ime obodo. A kwụsịrị ahịrị abụọ ahụ. N'ime oke nke ịlụso ọrịa coronavirus ọgụ [More ...]
Onye isi obodo Rome Gaziantep Fatma Şahin nyochara ihe ndị otu obodo ukwu ahụ megidere ntiwapụ Corona Virus (COVID-19) na saịtị ahụ. China si Wuhan obodo, na ụwa na mmadụ Republic na Turkey n'okpuru nduzi [More ...]
Lane Social Distance maka Socialgbọala na msgbọala Na-emegide Corona na Gaziantep
Gaziantep Metropolitan Municipality, Corona Virus (Covidien-19), na mgbakwunye na a okirikiri nyere site Ministry of Interior maka ọha iga, na-ewere ihe megide ndị ọrịa mere a mbụ na Turkey. Otu egwuregwu obodo, tram na [More ...]
Ọrụ ụgbọ oloko na Iran nke Ikpeazụ gara n’ihu: ‘TCDD na-ekwu‘ Nọrọ n’ebe Ọrụ ’Ọ bụghị‘ Nọdụ n’ụlọ ’
Tonguç Özkan, Isi nke Adana Alaka nke United Transportation Union: Mgbe onye ọ bụla na-arụ 'nọrọ n'ụlọ' n'ụwa niile, njikwa TCDD na - arụgide 'Gaa ọrụ' ka ọrụ ndị a na - ebupu ibu kwụsị. N'otu aka, gọọmentị [More ...]
India Map Train Route Speed ​​Speed: N’oge na-adịghị anya India ga-enwe ahịrị ụgbọ okporo mgbọ mgbọ, bụ nanị ụgbọ oloko dị elu nke nwere ike ịgba ụgbọ elu na ọsọ karịa 250 km kwa elekere. Traingbọ oloko mgbọ egbe Japan [More ...]
'Virtual Trade Academy' mepere, na-enye ọzụzụ ọzụzụ efu
Ministri ahia meghere Virtual Trade Academy, nke bụ usoro pụrụ iche maka ndị chọrọ ịtọ ụlọ ọrụ na ndị chọrọ ịmalite azụmaahịa mba ofesi. Onye Minista Ahịa Trade Ruhsar Pekcan na-enye ụmụ amaala niile n'efu [More ...]
Oge o ji alọta abịara İzmir?
Izmir Metropolitan Mayor Tunç Soyer kwuru na anyị banyere izu abụọ kachasị dị egwu na nzukọ anyị na ndị isi 30 na ịntanetị ma kwuo, "Nzukọ nzukọ mbụ oria ojoo nke gọvanọ anyị, [More ...]
Onye isi ala Gürkan Alparslan nyochara Ọrụ okporo ụzọ Türkeş Boulevard
Selahattin Gürkan, onye isi obodo nke Malatya Metropolitan Municipality, mere ule nyocha n'okporo ụzọ mgbapụ 25-mepere emepe ka ọ bụrụ ụzọ ọzọ na-aga n'okporo ụzọ mgbanaka. Na-eme nkwupụta ebe a mgbe nyochachara, Onye isi ala Gürkan kwuru, “Alparslan na-amalite site na akwa Ergenekon [More ...]
Nsogbu Nsogbu Izmir na Obodo
Ndi isi obodo Izmir bidoro imejuputa onodu ojoo site na oria Coronavirus. Mayor wee Soyer, "Izmir Metropolitan Municipality dị ka ihe atụ na Turkey enweghị atụba na ngwa ka mbinye aka na ọhụrụ ọchịchị nsogbu [More ...]
Taa na akụkọ 31 March 1868 3 maka Rumeli Railways. Edebere nkwekọrịta ahụ na ụmụnne ndị Belgium Van der Elst na ndị mmekọ ha. 31 March 1919 Akwụkwọ ozi ahụ zigara n’aka Onye Ọchịagha na Chief nke Nafia Ministry of Communications na dadlọ Ọrụ Baghgbọ njem Baghdad. [More ...]